Home / Interior design / Gray Senior, Avocado Green ary Champagne Pink, toerana romantika misy ny fiaraha-monina Retro sy maoderina
2020 / 10 / 16 FisokajianaInterior design 1850 0
Afaka jerenao amin'ny hazo rehetra, voninkazo, zavamananaina rehetra izany.
Manome fampiononana sy tanjaka ho anao ny fahitana fa misy Andriamanitra na aiza na aiza.
Ny tompon'ity tranga ity dia mpivady vao, nifidy trano tsara fanaka izy ireo ho toy ny suite voalohany taorian'ny fanambadiana. Mifanaraka amin'ny filan'ny fiainana tokoa ny habaka, noho izany tsy misy fiovana eo amin'ny rafitra, amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fanaka malefaka fotsiny mba hahatratrarana endrika endrika mirindra sy hanatsara ny kalitaon'ny fiainana.
Ny famolavolana ankapobeny dia aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika "Princess Sissi", manambatra singa ny lamaody Retro sy ny lamaody maoderina. Manantena izahay fa hamorona rivo-piainana mafana sy marefo ary tantaram-pitiavana mifanaraka amin'ny gadon ny fiainan'ny tanora an-tanàn-dehibe ankehitriny. Volondavenona mandroso, maitso avocado, champagne mavokely ho loko lehibe, manampy tsipika plaster handrafitra ny fahatsapana firafitra geometrika. Ny fampiasana fitaovana vy sy vera manerana ny habakabaka dia miteraka fihenjanana mahatsiravina miafina avy any ivelany mankany ivelany.
Misokatra malalaka ny fidirana, mampiasa volondavenona avo lenta mba hampisehoana ny kabinetra kiraro + valizy + ny faritra miova kiraro iray manontolo, ny ilany havia amin'ny varavarankely misy endrika fotsy, ny lafiny ankavanan'ny latabatra vita amin'ny plastera voasokitra ho an'ny fametrahana zoro kanto. Raha vantany vao miditra ao amin'ny efitrano ny tompony dia afaka mahatsapa ny tara-pahazavana voajanahary sy ny atmosfera kanto izy.
Ny rindrin'ny fahitalavitra sy ny seza fahitalavitra tany am-boalohany dia tsy nifanitsy, ka dia nifanakalo ireo toerana izahay. Fototra volondavenona zokinjokiny, avocado loko maitso mifanohitra amin'ny rindrin'ny fahitalavitra, champagne mavokely mitsambikina rindrin-kazo sofa, volamena noho ny fanapahana tsipika, ka ny gadona habakabaka iray manontolo dia mavitrika avy hatrany, mampiseho fahatsapana fahasarotana.
Andalana plastika géometrika sy rindrina fisarahana loko mavokely ho an'ny fifandonana, haingo amin'ny fampitana fahatsapana fiovana sy fihetsiketsehana. Ny sofa vita amin'ny volory dia toy ny sary sokitra tsara, nefa tsy sarotra akory, ary ny feo sy ny hazavana dia maneho fanjakana malefaka sy tsara tarehy.
Ny lambam-baravarana ambainy dia miteraka fahatsapana fihetsehana, raha ilay sofa tokana kosa nefa tsotra dia tena akaiky. Matetika ny vadin'ny trano no mandray dite eto ary mamaky gazety. Ny toerana sinema dia mifanaraka amin'ny eritreriny momba ny atao hoe fiainana amin'ny tsara indrindra.
Nisafidy latabatra boribory kely izahay mba hanamaivanana ny fahatsapana fa nigoka tao amin'ny efitrano fisakafoanana, ary nohodidinina seza efatra hampifanakaiky ny fianakaviana.
Ny famolavolana fitaratra fitaratra dia manitatra ny fahatsapana ny habaka, ary ny fitaratra ambonin'ny dia manitatra ny fifandraisana akaiky amin'ny efitrano fisakafoanana, izay misy ny fombafombam-piainana amin'ny antsipiriany.
Ny rindrina ambadiky ny efitrano fandraisam-bahinin'ny tompony dia mampiasa ny fanapahana tsipika hanovana ny habaka, toy ny sôkôla fotsy manankarena, miandry ny hahafoana ny tompony. Ny fanaka malefaka sy ny loko ankapobeny dia mitambatra, mamorona efitrano fatoriana tsara sy mafana.
Ny efitrano fatoriana tompony tany am-boalohany dia efitrano fiambenana miendrika endriny, mampiasa fomba fanapahana diamondra izahay hanamboarana ny lamina. Ny habaka namboarina tany am-boalohany miaraka amina tsipika misavoritaka dia nanjary toradroa sy voalanjalanja, nanomboka tamin'ny fisafidianana akanjo, fampitaovana, fitafiana, ny tsipika dia vita indray mandeha mba hanomezana fahafaham-po tanteraka ny filan'ny tompony.
Raha ny hevitray, ny fanavaozana trano feno fanaka dia miankina amin'ny filan'ny tsirairay ny tompon-trano. Tsy voatery hidika izany fa tsy ho tratra ny famolavolana tsara raha tsy misy fanovana ara-drafitra.
Taloha dia sambany teo amin'ny tantaran'ny orinasa no nahavita nanapa-kevitra ny orinasa raha hamatsy vola amin'ny trano vaovao na tsia.
Plan Drafitra tany am-boalohany
▲ Fandaminana drafitra
Karazan-trano: efitrano efatra sy efitrano fatoriana roa
Lamin'ny serivisy: Famolavolana tranga iray manontolo
Adiresin'ny tetikasa: Chengdu, Sina Sina-Commonwealth Alemanina
Agence famolavolana: Chengdu Hongfu Besam Space Design
Previous :: Hazo mainty fotsy fotsy sy fotsy fotsy, lamba tsotra | Aizhu Design Next: Ny sira dia mety ho toerana mamy Mori, Mood Bourgeoisie Cozy voajanahary | ENJOYDESIGN